Cunto baradho macaan, waxaan kuu sheegeynaa sida miisaanka loogu dhimo cunnadan | Cuntada Nutri
Kani waa cunto loogu talagay kuwa ubaahan inay sameyaan cunto si ay u lumiyaan miisaanka maxaa yeelay waa culeys xad dhaaf ah waana taageerayaasha baradhada macaan. Waad sameyn kartaa ugu badnaan 1 toddobaad, waxay kuu oggolaaneysaa inaad miisaankaaga hoos u dhigto qiyaastii 2 kiilo. Hadda, waa inaad haysataa xaalad caafimaad oo caafimaad si aad u dhaqan geliso.
Haddii aad go'aansato inaad fuliso qorshahan, waa inaad cabtaa 2 litir oo biyo ah maalin kasta iyadoon loo eegin waxa aad ku cunayso cuntada, ku macaan faleebadaaga macaaneeyaha isla markaana cuntadaada ku cusbo milix iyo qadar yar oo saliid ah gabbaldayaha. Baradhada macaan waad ku karin kartaa foornada ama waad karisaa.
2 Maxay baradhada macaan ugu fiican tahay miisaanka oo yaraada?
3 Guryaha baradhada macaan
4 Immisa kiilo ayaa ku lumay cuntada baradhada macaan?
5 Liiska cuntada baradhada macaan
6 Baradho macaan miyaad ku badali kartaa baradhada macaan?
Quraac: 1 faleebo oo aad dooratay (kafee ama shaah) iyo galaas casiir khudradeed ah oo aad dooratay.
Saaka-badh: 1 faleebo aad dooratay (kafee ama shaah) iyo 2 buskud oo buunshaha ah.
Qadada: 1 koob oo maraq fudud ah, qadarka aad rabto baradhada macaan iyo 1 miro ah oo aad dooratay.
Galab-galab: 1 faleebo aad dooratay (kafee ama shaah) iyo 2 buskud oo hadhuudh ah oo dhan.
Cunto fudud: 1 faleebo aad dooratay (kafee ama shaah) iyo 1 yogurt dufan yar.
Casho: 1 koob oo maraq fudud ah, qadarka aad rabto baradhada macaan iyo 1 miro ah oo aad dooratay.
Hoos waxaad kaheleysaa liiska cuntooyinka baradhada macaan ee usbuuca oo dhan.
Maxay baradhada macaan ugu fiican tahay miisaanka oo yaraada?
Runtu waa tan baradhada macaan waxay u fiican tahay miisaanka oo yaraada iyo wixii ka sarreeya, inaad lumiso caloosha. Mid ka mid ah meelaha sida caadiga ah noo khuseeya oo aan had iyo jeer sahlaneyn in hoos loo dhaco. Waa hagaag, baradhada macaan waxay noqon doontaa xulaf weyn maxaa yeelay waxay leedahay index fiber sare. Tani waxay naga dhigeysaa inaan ka dheregno annaga oo qaadanayna qaddar yar. Dheef-shiidku wuu ka gaabin doonaa, markaa dareenka ah inuu dhergo, waxaan sidoo kale la socon doonnaa waqti ka dib.
Dhinaca kale, waa isha saxda ah ee antioxidants iyo leh glycemic index hooseeya. Runtu waxay tahay baradhada macaan ee tilmaantaani aad uga hooseyso baradhada. Marka had iyo jeer waa xulafo wanaagsan. Goorma waxaan rabnaa inaan dhimoWaxaan ubaahanahay heerarka gulukoosta dhiigga inay noqdaan kuwo isku dheelitiran, maxaa yeelay baradhada macaan ayaa tan noo sameyn doonta. Laakiin sidoo kale waa cunto kaloori-yari ku jirto oo biyo badani ku jiraan, taas oo dheef-shiidka ka dhigaysa mid aad u wanaagsan.
Guryaha baradhada macaan
Waad ku mahadsantahay maadada sare ee carotenes, oo leh awood antioxidant, waxay naga dhigeysaa mid ka mid ah cuntooyinka lagama maarmaanka u ah cuntadeena. Sidaan sifiican u ognahay, baradhada macaan waxay leedahay borotiino dabiici ah oo aan laga adkaan karin. Laakiin sidoo kale waa inay sidoo kale leedahay boqolkiiba sare ee fiber, isla waqtigaas oo ay ka kooban tahay macdanta sida kaalshiyamka, magnesium, ama potassium, adigoon ilaawin fitamiin C. 100kii garaam ee baradho macaan, wuxuu jirka ka baxayaa ilaa 30 ml oo fiitamiinkan ah sidoo kale fiitamiin E. Laakiin sidoo kale wuxuu bixiyaa 480 mg oo ah potassium, 0,9 mg oo bir ah, 3 garaam oo fiber ah iyo wax ka yar ka badan 90 kalori.
Ma hilmaami karno, maadaama aan soo sheegnay fiitamiino, oo sidoo kale leh B1, B2, B5 iyo B6.
Immisa kiilo ayaa ku lumay cuntada baradhada macaan?
Runtu waxay tahay inay tahay cunno gaagaaban. Waa inaan lagu kordhin waqtiga, maxaa yeelay sida aan ognahay, markasta waa inaad wax u cuntaa si dheellitiran. Way ku habboon tahay inaad lumiso miisaanka isla waqtiga caloosha. Laga yaabaa in aad qaado ilaa shan ama lix maalmood ugu badnaan. Ilaa iyo inta caafimaadkaagu fiicanyahay. Waqtigaas waxaad lumin kartaa laba kiilo. Laakiin waa run in jidh kastaaba gebi ahaanba ka duwan yahay oo ay jiri doonaan dad laga yaabo inay yeeshaan hoos u dhac muuqda.
Liiska cuntada baradhada macaan
Quraac: galaas casiir baradhada macaan iyo laba liin
Subax-dhexe: 30 garaam oo rootiga qamadiga ah leh caano fadhi ah
Qadada: Baradho macaan oo la dubay (inta aad u baahan tahay) oo leh baaquli saladh iyo yaanyo ah
Galab dhexe: Faleebo iyo laba buskud oo badar ah
Casho: Baradho macaan oo la dubay oo leh kareem khafiif ah iyo miro macaan.
Quraac: Galaas casiir baradhada macaan, ukun adag iyo miro
Subax-dhexe: 30 garaam oo rooti dhan ah oo leh 50 garaam oo jiis fudud
Cunto: Baradho macaan oo lagu qasay qaado qaado oo caano aan badnayn iyo 100 garaam oo naaska digaagga la dubay oo leh khudrad
Galab dhexe. Faleebo iyo 30 garaam oo badar ah oo leh caano fadhi ah
Casho: Baradho macaan oo la dubay oo leh salad iyo miro
Quraac: Qaxwada kaligeed ama caano aan badnayn, 30 garaam oo rooti qamadi ka samaysan iyo seddex xabbo oo turkey ah ama naaska digaaga
Subax-dhexe: 50 garaam oo jiis fudud iyo laba xabbo oo miro ah
Cunto: Chips baradho macaan oo la dubay ama microwaved leh 125 garaam oo kalluun ah iyo baaquli saladh ah.
Galab dhexe: Casiir baradho macaan iyo caano fadhi
Casho: Baradho macaan oo leh saxan maraq fudud iyo miro macaan.
Quraac: Faleebo baradho macaan ama casiir leh 5 xabo oo turkey ama digaag ah iyo gabal khudrad ah
Subax-dhexe: 30 garaam oo badar dhan leh caano dufan ah
Qadada: Baradho macaan iyo saladh la dubay
Galab dhexe: 30 garaam oo rooti qamadi dhan leh jiis ah 0%
Casho: Baradhada macaan ee shiidan, 150 garaam oo kalluun ah iyo caano fadhi caano ah.
Quraac: Faleebo iyo laba nooc oo buskud ah
Subax-dhexe: laba xabbo oo midho ah
Cunto: Baradho macaan oo la kariyey oo leh laba ukun oo la kariyey iyo hal miro ah
Galab dhexe: 30 garaam oo rootiga qamadiga ah oo leh turkey
Casho: Salad, baradho macaan iyo milix caano fadhi ah
Baradho macaan miyaad ku badali kartaa baradhada macaan?
In kasta oo ay su’aashu ka mid tahay kuwa ugu badan, haddana runta ayaa ah in jawaabta ay ka fududdahay sida aan filayno. Sida baradhada macaan iyo baradhada macaan waa isku mid. Taasi waa, laba magac oo isku mid ah. Laakiin waa run oo meel kasta waxaa lagu ogaan karaa midkood, taas oo inta badan keenta jahwareer. Waa in la yiraahdaa baradhada macaan ama baradhada macaan waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca baradhada macaan ama baradhada macaan.
Runtu waxay tahay in kastoo had iyo jeer ay isku cunto tahay, haddana waxaan ku kala duwanaannaa farqiga u dhexeeya. Maaddaama ay leedahay noocyo badan oo tanina waxay ka dhigtay magacyada si ay ugu magacaabaan sidoo kale ka duwan. Mid ka mid ah farqigaas ayaa ku jiri doona midabka labadaba saxarka iyo maqaarka. Maaddaama noocyada leh maqaarka casaanka ay yihiin waxa aan ugu yeerno baradhada macaan, halka kuwa maqaarka qafiifka ah leh waxaa loogu yeeraa baradhada macaan. Marka, marka aan dooneyno inaan ka hadalno baradhada macaan ama baradhada macaan ee cunnadeenna, waa inaan ogaanno inaan ku soo tiin doonno isla wanaagga, tayada iyo faa'iidooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Cunto baradho macaan
Haddii aan yeelanayo maraq jilicsan, 4 rooti iyo laba koob oo kafee ah maalintii, runti waxaan u dhiman doonaa gaajo waana sababta dhabta ah ee aanan u sameyn karin cuntooyinka si aan u dhimo
Ku jawaab eugenio
Way iga qoslisaa cuntooyinkan aad dhumisay miisaanka aad dadka ku khiyaanayso. Ma dhigaysid wax borotiin ah iyo fuuqbaxa aad galisay waxaad galisaa cashada oo ah goortaad cayillan tahay ... iskaba dhaafeyso nafaqooyinka yar ee aad cunayso ... waxa kaliya ee aad ku heli doontid tan Cunnadu waa inaad lumiso dareeraha dareeraha, ku lumiso muruq yar borotiin aadna gashato dufanka adoo gelinaya fuuqbaxa casho markii ay ahayd inaad quraacdo si aad xoog ugu yeelato maalinta oo dhan. Wuxuu horeyba usheegay in qofwalba uu yahay nafaqeeye isla markaana taas aawadeed ay u baabi'iyaan jirkeena iyo caafimaadkeena
Waa hagaag. … Uma maleynayo inaan awoodo inaan cuno wax hilib ah isbuuc laakiin heesaaga ayaa sameeyay cunnadan sifiican ayeyna udhacday
Jawaab Inna Salazar
Halkee cadaabta ay kujirtaa borotiinka ku jira cuntadan? Waa run baradhada macaan inay aad u nafaqo badan tahay laakiin waa inaad ku darsataa borotiin, si walwalku uusan kuu waalin ka dibna aad u rabto inaad maroodi dhan u cuntid ... Cunto la'aan Taas oo aan ku dhisnayn borotiin waa wax aan faa'iido lahayn ... Labadaba si loo kordhiyo murqaha jirka iyo in la yareeyo dufanka jirka
Jawaab Fabio Calderon
Fikradaha casho fudud ee lagu raaxeysto xagaagan